TETIKASA TANAMASOANDRO : Hanakorontana ireo andian’olona voakarama
Hanakorontana indray ireo andian’olona manohitra ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro. Ny sabotsy izao no manambana hanao hetsika goavana eny Ambohitrimanjaka izy ireo. 17 octobre 2019
Miezaka ny manampin-tsofina tanteraka ny vitsy an’isa amin’ireo olona milaza ho tompon’ny tanimbary voakasik’ilay tetikasan’ny Filoham-pirenena eny Ambohitrimanjaka. Tsy vitan’izay fa manao ny ezaka rehetra hanakorontanana sy hitaoman’olona ihany koa izy ireo.
Efa nisy ny hetsika nataon’ireo andian’olona maromaro niaraka tamin’ny filanjana sora-baventy talohan’izao. Voatondro ho tompon’andraikitra tamin’ny fitarihana an’ireo mpanao fihetsiketsehana ny solombavambahoaka Tim eny Atsimondrano.
Tamin’io fotoana io, tonga teny an-toerana ihany koa ny mpikambana iray tao anatin’ny Rmdm izay mazava ho azy fa mijoro ho mpanohitra izao fitondrana izao. Ny sabotsy ho avy izao, manambana ny hanao fihetsiketsehana goavana indray izy ireo hoentina hanoherana hatramin’ny farany an’io tetikasa fananganana tanana vaovao io.
Ny fitondram-panjakana anefa dia naneho fahavononana tanteraka ny hifampiraharaha amin’ireo mponina indrindra fa ireo manana tany na tanimboly voakasika. Nilaza mazava ny Filoha fa tsy misy ho very maina ireo tany tsy maintsy hototofana fa honerana avokoa. Hampitomboina avo roa heny ny tanin’ireo mpamboly vary, ary vidina amin’ny vidiny ara-dalàna kosa ny an’ireo izay tokony hovidiana. Vao tamin’ny herinandro lasa teo ihany koa no nanatanteraka fidinana ifotony teny Ambohitrimanjaka ny Minisitra Hajo Andrianainarivelo izay Minisitra tompon’andraikitra amin’ny fananganana tetikasa goavana tahaka izao. Nitafa mivantana tamin’ ireo mponina. Nanazava tamin’ny antsipiriany ny fandehan’ny tetikasa sy ny fomba hanonerana ny tanin’ireo tantsaha. Nizotra tamim-pilaminana izany, maro tamin’ izy ireo no nanaiky saingy misy hatrany ireo mpandoto rano.
Raha nivahiny manokana tao amin’ny fahitalavi-panjakana ny Filoham-pirenena dia nohazavainy fa anisany nifidianan’ny vahoaka Malagasy azy ny tetikasa Tanamasoandro. Manoloana izany na inona na inona mety ho antony dia tsy hiolahana ny fanatanterahana izany. Nandritra izany ihany koa no niantsoany ny mponina mba tsy hanaiky horebirebena sy sandaina vola. Fotoanan’ny fampandrosoana izao. Mikatsaka fatratra izany ny fitondram-panjakana. Ny tanànan’Antananarivo dia efa hipoka tanteraka ary marobe ireo voka-dratsy aterak’izany. Noho io no nahatonga ny Filoha nanana tetikasa maty paika mba hanitarana ny tanàna ho tombotsoa iombonana.
Marihana fa isany voakasika amin’ny tetikasa ny Kaominina Ankadimanga, Ambohidrapeto ary Ambohitrimanjaka. Ny mponina ao amin’ireto farany dia efa nahitan’ny fanjakana vahaolana. Ho lohalaharana amin’ny fisitrahana ireo foto-drafitrasa izay hatsangana ao anatin’ny Tanamasoandro.